ABAZALI BABONGA UMASIPALA NGOKUXHASA ABAFUNDI - Ilanga News
Home Ezemidlalo ABAZALI BABONGA UMASIPALA NGOKUXHASA ABAFUNDI
ABAZALI BABONGA UMASIPALA NGOKUXHASA ABAFUNDI
Izikole eziwu-25 Ondini zihlomule ngo-R10 000 sisinye
ABAFUNDI abenze umatikuletsheni eJames Nxumalo Agricultural School ngonyaka odlule, uNandile Ngwira, uMesuli Ndlovu, uLindelwa Mvelase noThando Msiza bephahle iMeya yaseZululand, uMfu Thulasizwe Buthelezi, emuva komcimbi wokuklomelisa abafundi abenze kahle nyakenye.
BABONGA ukwehliselwa umthwalo wuMasipala wesiFunda wase Zululand ngokubambisana neMTN, abazali babafundi abawu 10 bezikole ezingaphansi kwalo masipala abaklonyeliswe ngo R10 000 umfundi emunye, ama laptop ne data ngokwenza kwabo kahle kumatikuletsheni wanyakenye. Laba bafundi baklonyeliswe emcimbini obungoLwesibili, eJames Nxumalo Agricultural High School, oNdini kanye nezikole eziwu 25 ezinikwe o R10 000 ngokuthola u 100% kumatikuletsheni wanyakenye. UMnu Sibusiso Ngema, ongumzali kaPhilasande Ngema, obefunda eMlokothwa High School nyakenye, othathwe ukuyokwenza izifundo zobunjiniyela eUniversity of Cape Town uthi lo mklomelo otholwe yindodana yakhe, uzoyilekelela kakhulu njengoba ziziningi izindleko uma umntwana eseya enyuvesi.
“Kimina akuyena uPhilasande yedwa osenyuvesi, bathathu, bonke babheke mina. Kufanele ngibathengele ukudla nezincwadi. Ngibonga othisha abebemfundisa umfana wami, ngoba ubengeke awuthole lo mklomelo ukube othisha bebehlala esigcakini bangabafundisi,” kusho uMnu Ngema. UNkz Sibongile Makhathini ongunina kaLuthando Makhathini obefunda eMasibumbane High School, othathwe e University of Cape Town ukuyokwenza iziqu zobudokotela, uthi njengoba esanda kuphelelwa wumsebenzi, baphila ngemali yempesheni kanina omzalayo.
“Ukuthola imali engaka, i laptop, itablet ne data kungifikisela ngezinyembezi ngoba imfundo bengibona ingasifanele njengoba siswele,” kusho uNkz Makhathini. Meya yaseZululand, uMfu Thulasizwe Buthelezi, uthe kulababafundi nezikole ezixhasiwe, kabathathanga ngisho isenti emalini kamasipala, kodwa kube ngosomabhizinisi abalekelelile. “Sibonga abakwaMTN ngabasenzele khona siwumasipala ukusiza laba bafundi, basinika ama tablet ne data. “Ngaphezu kokuxhasa laba bafundi esiziqhenyayo ngabo, siphinde sakhipha u-R1 million ukuxhasa abafundi abawu 100 abavela emindenini ehlwempu ukuze bakwazi ukubhalisa emanyuvesi. Sibonga nothisha abenze umsebenzi oncomekayo ngokukhiqiza imiphumeka emihle bethola o-100%.
“Lab’ o-R10 000 esibanika izikole zabo, bangenza noma yini ngabo ukuthuthukisa imfundo. “Lokhu esikwenzayo, sikwenza sinyathela ezinyathelweni zoMntwana waKwaPhidangene, iNkosi Mangosuthu Buthelezi, owabamba iqhaza elibonakayo emfundweni akha izikole, izikhungo zemfundo ephakeme okubalwa amakolishi namanyuvesi. “Lokhu esikwenza namhlanje sifisa kugqugquzele umatikuletsheni walo nyaka, wazi ukuthi ukusebenza kanzima kuba nemivuzo emihle njengalona,” kusho uMfu Buthelezi.
Uveze ukuthi basezinhlelweni zokulungisa isikhumulo sezindiza sasoLundi abakholwa wukuthi uma sekunezindiza kusona, kunentsha eningi ezoqashwa. I-Zululand ithole u-78.2% kumatikuletsheni wanyakenye, kwathi abafundi abaphase ngebachelor baba wu-6 545 kwabawu-13 655. Kulesi sifunda ziwu-139 izikole ezithole ngaphezu kwa75% kwathi eziwu-68, zatholangaphansi.
Previous articleUthole ukugxekwa uBaxter
Next articleUSEPHILA NGOKUKHOSELA EMIZINI YABANTU OWADILIKELWA YINDLU